Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း)
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အဆုတ်ရောင်ခြင်းဆိုတာ အဆုတ်မှာ ပိုးဝင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန်အဆုတ်ရောင်ခြင်းဟာ ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်းထက် ပိုပြင်းထန်ပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားကို တခါတရံမှာ လမ်းလျှောက်အဆုတ်ရောင်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီရောဂါဖြစ်ချိန်မှာ အနားယူဖို့ ဆေးရုံတက်ဖို့ မလိုသလောက်ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အတွေ့နည်းပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးခြင်း (တခါတရံမှာ သွေးပါတဲ့ အချွဲတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်)
တခြားလက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့အခါ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ပိုအောင့်လာခြင်း
အစားပျက်ခြင်း၊ အားကုန်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း
ကြွက်သားများကိုက်ခဲပြီး အဆစ်များ တောင့်တင်းခြင်း
တွေ့ရနည်းတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Mycoplasma နဲ့ chlamydophila ဘက်တီးရီယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်းဟာ သိပ်မပြင်းထန်ပါဘူး။ legionella ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်းဟာ ပထမ ၄-၆ရက်အတွင်း ပိုဆိုးလာပြီး နောက် ၄-၅ရက်လောက်မှာ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
ချောင်းဆိုးလျှင် အသက်ရှူလျှင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း
သိလိုတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖြစ်ပျက်ပုံတော့ မတူနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အရာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Chlamydophila pneumonia (C. pneumoniae)
အသက် ၄၀အောက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် လူ၂သန်းခန့် အနည်းဆုံး ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ကျောင်း၊ အကျဉ်းထောင်၊ စုဝေးနေထိုင်ကြတဲအိမ် စတဲ့လူထူတဲ့နေရာတွေမှာ နေသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေအချက်တွေ မတွေ့ရဘဲလည်း ရောဂါတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
လီဂျင်နဲရောဂါလို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ ရောဂါပိုးပါတဲ့ရေငွေ့ကို ရှူမိရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးကို အဆောက်အဦတွေရဲ့ ရေပေးဝေရေးစနစ်တွေထဲမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တခြားအမျိုးအစားထက် ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
တနေရာထဲက လူ၂ယောက် ပုံစံတူဖြစ်ရင် ဒီရောဂါပြန့်နှံ့မှုကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒေသန္တရ ကျန်းမာရေးဌာနတွေက ဖြစ်ပါားနိုင်ခြေရှိရင် စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီရောဂါပိုးကို ထိတွေ့သူမှန်သမျှ ဖြစ်ပွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Pontiac ဖျားခြင်းဟာ ဒီရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါားတတ်တဲ့ အဆုတ်ရောင်ခြင်းလောက် မပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ Pontiac အဖျားရှိရင် အဆုတ်မရောင်ပါဘူး။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲနေခြင်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးကို ထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်ထင်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ဒီရောဂါဟာ တနှစ်ပတ်လုံး ဘယ်အချိန်မှာမဆို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေ သိပ်မပြင်းထန်ပါဘူး။
ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေမြှ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ ၅၀%လောက်ဟာ အသက်၂၀မှာ ဒီရောဂါဖြစ်ဖူးခဲ့ကြပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ဟာ အဆုတ်ရောင်ခြင်းနဲ့ တခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြသနာတွေကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
လက္ခဏာတွေပေါ် မူတည်ပြီး တခြားစစ်ဆေးမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ပါစစ်ဆေးခြင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အဆုတ်မှထွက်သော အချွဲတွင် ပိုးမွေးကြည့်ခြင်း
ခုခံပစ္စည်းကို သွေးထဲမှ စစ်ဆေးခြင်း
Atypical Pneumonia (ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါပိုးအပေါ် မူတည်ပြီး ကုသပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မပြင်းထန်ရင် ပဋိဇီဝဆေးကို သောက်ဆေး ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုဆိုးရင် ဆေးသွင်းပါလိမ့်မယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေကို အနည်းဆုံး ၂ပတ် သောက်သုံးရနိုင်ပါတယ်။ နေကောင်းတယ်ထင်ရင်တောင် ဆေးအားလုံးကို ကုန်အောင်သောက်ပါ။ ဆေးကိုရပ်တာမြန်ရင် ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ ကုရပိုခက်သွားပါတယ်။
ပိုပြီးဆိုးရားတဲ့လူနာတချို့ဟာ အောက်ဆီဂျင်ရှူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ပုံစံကွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
ဖျားနာတဲ့အခါ အဖျားကျဆေးတွေသောက်ပါ။ ကလေးတွေကို အက်စ်ပရင် မတိုက်ပါနဲ့။
ဆရာဝန်မပြဘဲ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ မသောက်ပါနဲ့။ သလိပ်ရယူဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။
ချွဲပျော်ပြီး သလိပ်ခတ်နိုင်အောင် အရည်များများ သောက်ပါ။
များများ အနားယူပါ။ ကူဖော်လောင်ဖက်ခေါ်ထားပါ။
1. Atypical pneumonia. https://medlineplus.gov/ency/article/000079.htm. Accessed3Mar 2017
2. Atypical Pneumonia (Walking Pneumonia). http://my.clevelandclinic.org/health/articles/atypical-pneumonia-walking-pneumonia. Accessed3Mar 2017
3. Atypical Pneumonia. http://www.healthline.com/health/atypical-pneumonia?s_con_rec=true#Diagnosis5